Voka-pifidianan’ny Ceni : Mety hihemotra ny famoahana azy -
AccueilSongandinaVoka-pifidianan’ny Ceni : Mety hihemotra ny famoahana azy
Voka-pifidianan’ny Ceni : Mety hihemotra ny famoahana azy
09/11/2018 admintriatra Songandina 0
Roa andro taorian’ ny fifidianana notontosaina ny faha-7 ny volana novambra lasa teo, dia biraom-pifidianana miisa 300 mahery ihany no mbola azon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana eo am-pelatanany. Raha ny tetiandro napetraka ahafahan’ ny Ceni mamoaka ny vokam-pifidianana tsy ofisilay anefa dia hatramin’ ny faha 20 ny volana novambra ho avy izao, ka aorian’ izay dia any amin’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny baolina. Raha atao izany ny kajikajy tsotsotra, raha roa andro no andraisan’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana vokatra 300 mahery amin’ ireo 24 852, dia tahaka izao ny vokatry ny kajy tsotsotra, 2 andro no hamitana biraom-pandatsaham-bato 300, izay zaraina amin’ ireo biraom-pifidianana 24 852. Manana 21 andro izany izy ireo vao mivoaka ny voka-pifidianana tsy ofisialy, raha isaina kosa anefa ny andro sisa am-pelatanan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana dia 12 andro sisa no hananan’izy ireo. Fanotaniana mipetraka dia ny hoe, sahin’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ve no milaza fa hajain’izy ireo io teti-andro nomeny io.
Fampanantenana tany am-boalohany napetraky ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, dia ny fampiasana fitaovana manaram-penitra eo amin’ ny lafiny teknolojia. Fitaovana tahaka ny angidim-by kosa hoy izy ireo no hitaomana ny vokam-pifidianana, mba hialana amin’ ny haihay tsy hihavanana. Roa andro taorian’ ny fifidianana anefa, mbola tsy nisy anefa hatreto na angidim-by iray aza tsy taratra niainga tahaka tamin’ ireny fampielezan-kevitra ireny ary mihisatra ny famoahana ny vokatra. Ny fimenomenonana etsy sy eroa rahateo zary tahaka ny sakafon’ ny Ceni, nefa dia mariky ny tsy fahatomomban’ny asa izany. Amin’ ny fotoanan’ny fifidianana tahaka izao no tokony hamohana ny fitaovana rehetra, ary io tsy ny Ceni ihany fa tokony handray anjara betsaka ny fanjakana amin’ ny fanampiana. Raha ny zava-misy amin’ izao fotoana izao, raha resaka vokam- pifidianana no jerena dia samy manao izay tiany ny rehetra. Samy mamoaka ny vokatra eo am-pelatanany, noho izany dia samy milaza ireo kandidà fa nahazo fandresana amin’ ny dingana voalohany amin’ ny fifidianana. Vokany dia hiady sy hikorontana ny Malagasy, raha tsy misy fandraisana andraikitra.
Tanambe – Morondava – Vohipeno : Voaporofo ny fahalanian’i Marc Ravalomanana